जन्मदर घट्नु चिन्ताकै विषय हो : महानिर्देशक श्रेष्ठ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८०
भविष्य जोडिएको विमानस्थल →
काठमाडौँ — केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यसपटक भने ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । वि.सं. १९८७ र १९७७ को जनगणनामा भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर १९९८ सालमा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :
जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशतबाट घटेर ०.९३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको कारण के हो ?
सामान्यतया भइरहेको जनसंख्यालाई प्रतिस्थापन गर्न एक जना महिलाले २.१ अर्थात १० जना महिलाले २१ जना बच्चाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अब यो भन्दा कम देखियो । यो घट्दै घट्दै गयो भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक नै हुने छ । तर अहिलेसम्म ऋणात्मकको अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं । दश वर्षमा करिब २७ लाख जनसंख्या वृद्धि भएको छ । तर वृद्धिदर घटेको छ । यसका पछाडि धेरैवटा कारण छन् । प्रमुख कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थासँग जोडिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका कारण वाल मृत्युदर घटेको छ । मृत्युदर घट्नेबित्तिकै जन्मदर पनि घटेर जान्छन् । ’cause मान्छेमा आत्माविश्वास बढेर जान्छ । शिक्षा आर्जन गरेपछि मान्छेहरू केही न केही रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा लाग्छ वा विदेश जान्छ । यी सबै काम गर्दा विवाह गर्ने उमेर नै ढिलो हुने, विवाह गरिहाले पनि चाँडो बच्चा नजन्माउने, जन्माए पनि एउटा मात्रै जन्माउने हुन थाल्यो । लैङ्गिक हिसाबले छोरा र छोरीबीचको विभेद पनि कम हुँदै गएको छ । विभेद कम भएपछि जे जन्मिए पनि एउटा वा बढीमा दुुई वटा मात्रै हुने भए ।
पछिल्लो समयमा त नेपालमा पनि एउटा मात्रै बच्चा जन्माउने दम्पती धेरै भइसके । मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा जन्मदर बढी नै छ । बाँकी ४ प्रदेशमा कम छ । वाग्मती प्रदेशमा एकजना महिलाले १.६ अर्था १० जना महिलाले १६ जना बच्चा मात्रै पाउँछन् । काठमाडौंमा १० जना महिलाले १४ जना बच्चा पाउँछन् । यसको अर्थ एउटा मात्रै सन्तान जन्माउने संख्या बढ्दो छ ।
अर्को कारण बच्चाहरूलाई हुकाएन लाग्ने लागत नेपालमा पनि निकै बढेर गएको छ । बच्चा जन्मिसकेपछि उचित खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो खर्च लाग्छ । जसले गर्दा धेरै बच्चा जन्माएनन् ।
अर्कोतर्फ विदेशमा बसोबास गर्ने मानिसहरू नेपालको जनसंख्यामा गणना हुदैन । नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्यामा गणाा हुन्छ । विदेश जाने संख्या बढी भएपछि यहाँको जनसंख्या कम देखियो । उनीहरूनै यहाँ नभएपछि उनीहरूले जन्माउने जनसंख्या पनि कम भएको हो ।
जन्मदर घट्नेक्रम विश्वव्यापी नै हो । विश्वकै जनसंख्या वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको थियो । नभन्दै हामी पनि त्यहीँ हाराहारीमा पुगेका छौं। अमेरिकाको जनसंख्या वृद्धिदर पनि ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । यसको अर्थ त्यहाँका मानिसहरू पनि आर्थिक गतिविधिमा व्यस्त भएर बच्चा जन्माउने क्रम घटिरहेको छ भन्ने हो । विकासको प्रक्रियानै हो यो । विकास र व्यस्तताले जनसंख्या वृद्धिदर घट्छ नै ।
जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक नै हुने सम्भावना छ कि छैन ?
अहिलेनै यो अनुमान गर्न अलि गाह्रो हुन्छ । हतार पनि हुन्छ । हामीसँग अहिले कूल जनसंख्या, त्यसमा महिला र पुरुषको जनसंख्या मात्रै छ । जसलाई प्रारम्भिक विवरण भनेका छौ । यो अनुमान गर्नका लागि जनसंख्या सम्बन्धी वृहत् विवरण आउनै बाँकी छ । त्यसमा पनि उमेर समूहको विवरण आएपछि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जनगणनाको सम्पुर्ण विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । २ करोड ९२ लाख जनसंख्याको छुट्टाछुट्टै विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि ६/८ महिना समय लाग्छ । एक वर्षपछि मात्रै जनसंख्याको वृद्धिदर ऋणात्मक होला वा नहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर ०.९३ प्रतिशतको वृद्धिदर भनेको १ प्रतिशतकै हाराहारी हो । त्यसकारण अझै केही देशकसम्म जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक नै चाहिँ नहोला भन्ने मेरो व्यक्तिगत अनुमान छ ।
अहिले सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार लैंगिक अनुपात (प्रति १०० महिलामा पुरुषको संख्या) करिब ९६ प्रतिशत छ । जुन अघिल्लो जनगणनामा ९४.१६ प्रतिशत मात्रै थियो । यसको पछाडि चाहिँ के कारण होला ?
लैंगिक असमानता कम हुनु नै मुख्य कारण हो । दोस्रो कुरा कोभिड–१९ महामारीको समयमा विदेश गएरका धेरैजसो युवाहरू नेपाल फर्केर आएका थिए । मुख्य गरि कामको सिलसिलामा भारत गएकाहरू हाम्रो जनगणनाकै समयमा फर्केर आएका थिए । कतिपय अहिलेपनि यहीँ बसिरहेका छन् । यस्तै उमेर समूहका पुरुष विगतको जनगणनामा बाहिर थिए । तर यस वर्षको गणनामा यहाँ आएको हुनाले पनि यस्तो हुन गएको हो ।
जनगणनाको नतिजा अनुसार २१ लाख ६९ हजार मानिस मात्रै विदेशमा रहेको देखिन्छ । तर कामको सिलसिलामा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको संख्या हेर्ने हो भने यो भन्दा दोब्बर छ । जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार विदेशमा रहनेहरूको संख्या कम अर्थात अलि अपत्यारिलो जस्तो देखियो नि ?
मेरो अनुमान पनि यथार्थ भन्दा कम संख्या नै हो । विदेशमा रहेकाको जनसंख्या जनगणनाले छुट हुन गएको छ । ’cause जनगणनाको विश्वव्यापी मापदण्डलाई अनुसरण गर्ने हो हामीले । नेपालमा भएको परिवारले टिपाएको संख्याको आधारमा हामीले करिब २२ लाख विदेशमा भनेका हौ । जो कोही एक जना यहाँ बस्छ, अरु विदेशमा छन् भने त्यसको विवरण आउने भयो । तर नेपालबाट पुरै परिवारनै विदेशमा गएका छन् । पुरै परिवार विदेशमा भएको सन्दर्भमा उसको संख्या यहाँ कसैले पनि गणकलाई टिपाउँदैनन् । त्यस्तो संख्या धेरै छ । त्यो छुट्दा संकुचनमा देखिएको हो ।
अर्कोतर्फ श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरू सबै उतै बसे भन्ने पनि छैन । आउने जाने हुन्छ । कतिपय त फर्केर यहीँ बसिरहेका छन् । त्यसकारण गएको मात्रै हेरेर भएन । यसको सामधान भनेको १० वर्षको जनगणना पर्खेर बस्ने हैन, सरकारले वर्षैभरी वास्तविक तथ्यांक लिएर बस्नुपर्छ । विदेशमा हाम्रा विभिन्न कुटनैतिक नियोगदेखि सरकारी संरचना छन् । उनीहरूले वास्तविक तथ्यांक अपडेट गरिरहनुपर्‍यो ।
०६८ को जनगणनाअनुसार विदेशमा रहने कूल नेपाली जनसंख्याको १२ प्रतिशत मात्रै महिला थिए । अहिले १८ प्रतिशत महिलाहरू छन् । यो वृद्धिको अर्थ चाहिँ के होला ?
यसमा दुईवटा कारण हुन जस्तो लाग्छ । एउटा– विदेशमा श्रमिक महिलाको माग बढ्दो छ । नेपाली महिलाहरू पनि गइरहनुभएको छ । श्रमको हिसाबले मात्रै हैन पढाई तथा अन्य कारणले पनि विदेश जाने बढेको छ । अर्को कारण हाम्रो लैंगिक विभेदको कम हुनु पनि हो । पहिले पहिले छोरालाई मात्रै विदेश पठाउने चलन थियो भने अहिले छोराछोरी समान भएका छन् । यसले पनि विदेशमा महिलाको संख्या उल्लेख्य बढेको हुनुपर्छ । आगामी दिनमा बढ्दै जान्छ ।
जनगणनाअनुसार अहिले परिवार आकार अर्थात संख्या घटेको छ । पहिले एउटा परिवारमा ४.८८ सदस्य हुन्थे भने अहिले ४.३२ छन् । यसभित्र कुन उमेर समूहका संख्या बढी होला ? डेमोग्राफिक हिसाबले केही भन्न सक्नुहुन्छ ?
अहिले नै अनुमान गर्न अलि कठिन नै हुन्छ । ’cause हामीसँग उमेर समूहअनुसारको पुरै विवरण प्रविष्ट भइसकेको छैन । तर केही संकेतअनुसार बालबालिकाको संख्यामा कमी आउने छ । युवाहरूको संख्या पनि कम देखिनेछ । वृद्धवृद्धाको संख्या बढी नै देखिन्छ ।
जनसंख्या भनेको कुनै पनि मुलुकको लागि एउटा ठूलो स्रोत हो, शक्ति हो । अहिलेको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार हाम्रो मुलुकमा समग्र अर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के होला ?
मैले अघि पनि भने यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो । यो संख्या मात्रै हो । अब लैंगिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, डेमोग्राफिक विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ । प्रारम्भिक रुपमा हेर्ने हो भने जन्मदर घट्नु अलि चिन्ताकै विषय हो । ’cause धेरै जनसंख्या विदेशीने, जन्मदर घट्ने र वृद्धवृद्धा मात्रै यहाँ रहने हो भने यसको चौतर्फी प्रभाव पर्ने छ । वृद्धवृद्धालाई दिने सेवासुविधादेखि विभिन्न आर्थिक भार बढ्दै जाने छ ।
उत्पादनशील युवाशक्ति नहुँदा झन बढी भार पर्ने छ । यहाँ उत्पादन झन्‌झन् घट्न जान्छ । यहाँ उत्पादन वा उचित सेवा दिनसक्ने श्रमशक्तिनै नहुने हो भने आर्थिक रुपमा निकै कमजोर हुनेछौं । यसकारण जनसंख्याको वृहत् विवरण आएपछि हाम्रो समग्र नीति नियममा पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ । यहाँ अझैपनि युवा शक्ति धेरै नै छन् । उनीहरूलाई यहीँ रोजगारीको अवसर दिन अब चुक्नु हुँदैन ।'(कान्तिपुर )